Ary izao ho an'ny lafiny maizina amin'ny varotra atiny B2B | Martech Zone
Rehefa mampihatra ny loharanom-pahalalana ilaina amin'ny paikady atiny mahomby ny orinasa iray, dia fandaniana sarotra indraindray ny mitelina satria mila fahazoana hery sy fahefana eo amin'ny sehatry ny indostria izany. Tena tsy manan-tsafidy izy ireo ivelan'ny fividianana fitarihana lafo amin'ny alàlan'ny programa dokam-barotra sy karoka. Ary tsy ny fiandrasana ihany no fanamby - ity infographic avy amin'ny Scripted ity dia manondro fanamby vitsivitsy hafa fa manome paikady optimista handresena azy ireo.
Rehefa mitombo ny lazan'ny marketing amin'ny atiny amin'ny indostria rehetra, dia maro ny mpivarotra no mifantoka amin'ny lanja mety hoentiny eo amin'ny latabatra. Marina izany, ny marketing amin'ny atiny dia fomba tsara hahatratrarana mpihaino vaovao, hiteraka fahatsiarovan-tena amin'ny marika, hampianarana ny mpanjifa sy maro hafa - saingy mety hanimba ny tetikady marketing koa izany, indrindra raha tsy vita tsara. Nicole Karlis, Scripted
Ny antsasaky ny mpivarotra rehetra dia tsy manana voarakitra paikady marketing amin'ny atiny ary 62% no mihevitra ny ezaka ataon'izy ireo tsy mahomby. Mazava ho azy, 21% no tsy marina famarana inona ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola ary ny roa ampahatelon'ny atiny noforonina ihany no navoaka. Ny scripted dia manome fomba 8 hisorohana ireo fanamby ireo - avy amin'ny firaketana ny paikadin'ny votoatinao, ny famoronana tetiandro misy atiny miaraka amin'ny vokatra tsy tapaka, fametrahana tanjona, famakafakana ny mpihaino anao ary famerenana ireo atiny miasa.
Zahao ny antsipiriany rehetra amin'ity infographic ity ary tsindrio raha te hijery ilay bilaogy Scripted izay ananany manana loharano iray taonina ho anao hanatsarana ny paikady sy fanatanterahana marketing amin'ny atiny!
Tags: b2bmarketing amin'ny atiny b2bfanamby amin'ny marketing amin'ny atiny b2bfanamby atiny
Fahadisoan-kevitra dimy tokony hialana amin'ny programa marketing mailakao